အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန် Facebook Shops များရောက်လာသည် Androidsis
Facebook Shops သည်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုရန်ရောက်ရှိခဲ့သည်
၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များစွာအတွက်သင်ရောင်းရန်ရှိသည်မှာ ၀ ယ်သူ persona ကို Facebook တွင်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သုံးစွဲသူများသည်အသက် ၃၅-၅၅ နှစ်ကြားရှိလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ဆိုင်များဖွင့်ထားသည် သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီများအဘို့, မဟုတ်သောသူတို့အဘို့။
Marc Zuckerberg ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုအမှန်မှာသူသည် Shops များစတင်မည်ဟုကြေငြာသူဖြစ်သည် Amazon ကဲ့သို့သောအခြား caliber ဈေးများနှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ အမှန်တရားကတော့ဒီလူမှုရေးကွန်ယက်မှာသန်းပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးရှိနေရင်ရှေ့တန်းအတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုရရင်မင်းလက်ထဲမှာအနိုင်ရတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ရလိမ့်မယ်။
2 Facebook က Shops ၏ vicissitudes
Facebook Shops ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို Marc Zuckerberg ကိုယ်တိုင်ကူညီပေးပါ။ ရာသက်ပန်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ခက်ခဲသည့်အချိန်များတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်သူတို့ကိုချဉ်းကပ်ရန်ချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ချုပ်နှောင်ခံထားရသောအချက်မှာအစားအစာဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမောင်းနှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Facebook မှတင်ပြသောဤအခွင့်အလမ်းသည်အရေးကြီးသည်ထက်ပိုလာသည်။
Facebook Shops မတိုင်မီ ကျနော်တို့ရှေ့တန်းမတိုင်မီကိုယ့်ကိုယ်ကိုထား။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသော်သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အွန်လိုင်းရှိသည့်သေးငယ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များသည်သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များကို Facebook Shops သို့ပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မရှိသောသူများကဲ့သို့ပင်သူတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချရန် Shops များကိုသုံးနိုင်သည်။
Facebook Shops များကို Facebook နှင့် Instagram နှစ်မျိုးလုံးတွင်ရနိုင်သည်။ အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခမဲ့တ ဦး တည်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မည် ကုန်ပစ္စည်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည့်စွမ်းရည်အားလုံးနှင့်အတူစတိုးဆိုင်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးဝယ်သူ၏စျေး ၀ ယ်မှုအတွေ့အကြုံကိုအလေးထားရန်သင့်အားအသင့်တော်ဆုံးသောအရောင်အရောင်ကိုသုံးပါ။
Facebook က Shops ၏ vicissitudes
အ ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာမှရှာဖွေနိုင်သည် သို့မဟုတ် Facebook ပရိုဖိုင်းတွင် Facebook ကြော်ငြာများသည်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကြေငြာမည့်အခြားနေရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ထုတ်ကုန်များကိုအကြိုက်ဆုံးအဖြစ်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ Facebook မှထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲတူညီသောဆိုင်မှပင်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို Facebook ရဲ့ Checkout, လူမှုကွန်ယက်၏ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုသို့တန်းဆင်းခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Checkout မရှိပါကငွေပေးချေရန်တံခါးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို Shops သို့သယ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သောအခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရေးအကြီးဆုံးအချက်များထဲကတစ်ခုမှာ WhatsApp, Messenger နှင့် Instagram Direct မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ.
မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဒီလိုပြောခဲ့သူမာ့ခ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သင် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်စတိုးဆိုင်တစ်ခု၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည် တူညီသော WhatsApp ကို, Messenger ကိုသို့မဟုတ် Instagram ကိုတိုက်ရိုက်ကနေ။ ဤအစိတ်အပိုင်းများတွင် WhatsApp ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ပြီးပြီးဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများစွာသည်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အသုံးပြုနေသည်။ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူမှုများအတွက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုကြည့်ပါ။
Este နွေရာသီတွင် Instagram Shops များကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ရောက်ရှိမည် ပြီးတော့ပိုပြီးဒေသများသို့။ ပြီးတော့အပြန်အလှန်အားဖြည့်ဖို့အားပေးတဲ့အနေနဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကဝယ်ယူမှုအတွက် Instagram မှာ tab တစ်ခုထည့်ပေးမှာပါ။ သူတို့ကောင်းစွာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ပုံရသည်။ အခြားအသစ်အဆန်းများမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လွှင့်သည့်အခါဗီဒီယိုမှထုတ်ကုန်များကိုတံဆိပ်ကပ်ရန်ဖြစ်သည်၊ သို့အတွက်နှစ်သက်သောအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံများကိုရရှိရန်လင့်ခ်များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပိုမိုနီးစပ်လိမ့်မည်။
မကြာမီပင်လာမည် သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည် ၀ ယ်ယူမှုအရကတ်ပြားများကဲ့သို့ပင်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့အားကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားအရာများသို့လဲလှယ်နိုင်စေရန်အချက်များပေးထားသည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊ Facebook သည် Amazon သို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် online shopping အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးလိုသည်။
နောက်ဆုံးတော့ Facebook သည် Shopify, Woocommerce ကဲ့သို့သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လက်တွဲနေသည်ဤပလက်ဖောင်းများမှရိုးရှင်းသောပေါင်းစည်းမှုအတွက် BigCommerce နှင့်အခြားအရာများ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်၎င်းတို့တွင်မည်သည့်အွန်လိုင်းဆိုင်မဆိုရှိပါကပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏စတိုးဆိုင်မှကုန်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ပစ္စည်းများကို Woocommerce နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခဲ့ပြီး၎င်းမှသင်သည် Facebook Shops နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ပိုများသောဝယ်ယူလမ်းကြောင်းများ, ပိုပြီးဝင်ငွေ။ လွယ်ကူပါတယ်။
ယခု Facebook Shops တွေရောက်လာဖို့စောင့်နေရတယ် ဒီအစိတ်အပိုင်းများအတွက်လပေါင်းများစွာမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ သင်မည်သို့ဖြစ်မည်နှင့်သင်မည်သို့လမ်းဖွင့်ပေးမည်ကိုစိတ်ကူးရသောထုတ်ဝေသောဗီဒီယိုများကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်သင်၏အေးမြသော Facebook avatar ကိုဖန်တီးရန်သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Facebook Shops သည်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုရန်ရောက်ရှိခဲ့သည်
iQOO Z1 ကို 144 Hz panel၊ Dimensity 1000+ နှင့် 5G connection များဖြင့်ကြေငြာသည်